Qoraalka bogan waa mid uqoran si qaab daran. Fadlan naga caawi hagajinta bogan.
Thomas Isidore Noël Sankara (21 Diseembar 1949 - 15 Oktoobar 1987) wuxuu ahaa olole u ololeeya arrimaha cadaaladda bulshada Burkinabé iyo Madaxweynaha Burkina Faso intii u dhaxeysay 1983 ilaa 1987. kacaanka oo mararka qaar loo yaqaan "Afrika ee Che Guvara".
Kadib markii loo magacaabay Raiisel Wasaaraha sanadkii 1983, khilaafkii ka dhex taagnaa dawladdii fadhida ayaa horseeday xadhigii Sankara ugu dambayntii. Intii uu xabsiga ku jiray, koox ka mid ah kacaanka ayaa xoog ku qabsaday magaca iyaga oo afgambi caan ka ahaa dabayaaqadii sanadkaas. Da'da 33, Sankara wuxuu noqday Madaxweynaha Jamhuuriyadda Volta Sare. Wuxuu isla markiiba bilaabay barnaamijyo ku saabsan isbeddelka bulshada, deegaanka iyo isbeddelka dhaqaalaha wuxuuna waddanka dib uga beddelay magaca gumeystihii Faransiiska ee loo yaqaan Vol Volta ilaa Burkina Faso ("Dhul Dad aan Cabbirneyn"), iyadoo dadkiisana loogu yeedho Burkinabé ("dadka toosan"). Siyaasadiisa arrimaha dibedda waxay udub dhexaad u ahayd la dagaallanka boqortooyooyinka, iyada oo dowladdiisa ay kaalmaynayso dhammaan kaalmada shisheeye, kuna riixeyso yareynta deynta xun, umaddeynta dhammaan dhulka iyo hantida macdanta iyo celinta awoodda iyo saamaynta Sanduuqa Lacagta Adduunka iyo Bangiga Adduunka. Siyaasadiisa gudaha waxay diirada saareysay ka hortagga macaluusha oo leh isku filnaansho agab iyo dib-u-habeyn dhulka, ahmiyada koowaad la siinayo waxbarashada olole qoris oo wadanka oo dhan ah iyo kor u qaadista caafimaadka dadweynaha iyadoo laga tallaalayo 2.5 milyan oo caruur ah cudurka meningitis, qandhada jaalaha iyo jadeecada.
Waxyaabaha kale ee ajandaha qarankiisu ahaa waxaa ka mid ahaa abuurista in ka badan 10 milyan oo geed si loola dagaallamo xaalufka sii kordhaya ee Sahel, dib-u-u-siinta dhulka laga haysto milkiilayaasha guryaha illaa kuwa digaarta ah, la hakiyo cashuuraha baadiyaha miyiga iyo kirooyinka guryaha iyo dejinta barnaamijka dhismaha iyo barnaamijka tareenka. Heerka maxalliga ah, Sankara wuxuu ugu yeeray tuulo walba inay dhisto xarun caafimaad oo ay ka koobantahay in kabadan 350 beel oo dhisto iskuul ay ku shaqeeyaan. Intaa waxaa dheer, wuxuu ka mamnuucay naafaynta xubnaha taranka ee haweenka, guurka khasabka ah iyo guurka badan. Wuxuu haweenka u magacaabay jagooyinka sare ee dowladda wuxuuna ku dhiirigeliyay inay ka shaqeeyaan guriga dibaddiisa oo ay iskuulka dhigtaan, xiitaa haddii uur leeyahay. Sankara wuxuu dhiiri galiyay maxkamadaynta saraakiisha lagu eedeeyay musuqmaasuqa, kacdoonka kacaanka iyo "shaqaalaha caajiska" ee maxkamada caanka ah ee kacaanka. Markii uu ahaa nin jecel kacaanka Kuuba, Sankara wuxuu aasaasay gudiyo nooca Cuba u ah difaaca kacaanka.
Barnaamijyadiisa kacaanka ee isku filnaashaha Afrika wuxuu u noqday sumcad u leh qaar badan oo ka mid ah saboolka Afrika. Sankara wuxuu caan ku ahaa inta badan muwaadiniintiisa wadankiisa. Si kastaba ha noqotee, siyaasadihiisu way kala fogeeyeen oo ka soo horjeesteen dhowr kooxood, oo ay ku jiraan kuwa yaryar laakiin xoog u leh fasalka dhexe ee Burkinabé; hoggaamiyeyaasha qabaa'ilka ee laga xayuubiyay mudnaantii ay lahaan jireen mudnaanta dhaqanka ee qasabka iyo bixinta canshuuraha; iyo dowladaha Faransiiska iyo xulufadiisa Ivory Coast. 15kii Oktoobar 1987, Sankara waxaa diley ciidan uu hogaaminayey Blaise Compaoré, oo la wareegay hoggaanka sare wax yar ka dib markii la dilay Sankara. Toddobaad ka hor dilkiisa, Sankara wuxuu ku dhawaaqay: "In kasta oo kacdoonnada shaqsiyaadka la dili karo, ma dili kartid fikradaha".
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Sankara&oldid=203825"
Last edited on 23 Luuliyo 2020, at 00:48
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Luuliyo 2020, marka ee eheed 00:48.